I-PHP: Ukufikelela kwifayile kunye ne-umlauts phantsi kweWindows
I-PHP: Ukufikelela kwifayile kunye ne-umlauts phantsi kweWindows09
Iifayile ezikwiiseva zewebhu kufuneka zihlale zingenazithuba (hayi "lo ngumfanekiso.jpg"), ngaphandle kweemlauts okanye abalinganiswa abakhethekileyo (hayi "ibhola.jpg"), ngaphandle komhlathana (hayi "Arbeit \_ Auto.jpg") nakunobumba omncinci (hayi " Uvavanyo lweJPG "). Kutshanje, nangona kunjalo, kuye kwafuneka ndingene kwaye ndicwangcise inani elikhulu leefayile ezisetiweyo ngalo naliphi na igama lefayile yeprojekthi yomthengi.
Iinkqubo zeLinux zivumela ukufikelela kwiifayile ezinee-umlauts kunye nabalinganiswa abakhethekileyo ngokungagqibekanga, ukuze kungabikho zimpawu zikhethekileyo ekufuneka ziqwalaselwe apha. Ijongeka yahluke ngokupheleleyo kwiinkqubo zeWindows: Apha kuya kufuneka usebenzise amanye amaqhinga kwaye ucofe ujongano lwe-COM. Okokuqala, ubandakanya ulwandiso olufunekayo kwi-php.ini
Nye. Ngoku iklasi yokunceda eluncedo kakhulu iWinfsUtf8 isetyenzisiwe, eyenza lula ukufikelela kwizinto ze-COM kunye neemephu phantse kuyo yonke imisebenzi ye-PHP echaphazela iifayile. Emva kokudibanisa ifayile kunye
Inye inawo onke amathuba okufikelela kwifayile, umzekelo iziphumo